Niagara Falls vs Foz do Iguaçu Nso idi mmiri kacha mma? - 1aviagem.com
Previous post: Um vulcão e o milagre na primeira viagem ao Chile
Next post: Por quê franceses torcem o nariz quando você fala em inglês e o que isso tem haver com os brasileiros?
Edebere 6 April 2019 site Römulo Lucena
Ndewo onye ọ bụla na taa anyị na-aga ikwu banyere mmiri mmiri! Na abụọ n'ime ndị ukwu.
Kedu nke ka mma: Niagara Falls ma ọ bụ Foz do Iguaçu? Ma nke kachasị n'ime ha?
Tupu anyị ebido, m ga-achọ ime ka o doo anya na nke a bụ ihe atụ e mere na data data m nwetara. Ajụjụ nke abụọ bụ echiche zuru ezu banyere ebe ahụ dịka onye njem nleta. (Lee echiche m!)
Maka ịga leta abụọ ahụ, ekpebiri m igbu ọchịchọ ịmata ihe ma chọpụta banyere ha ka anyị na-aga na tụnyere?
Echere m na nke a bụ akụkụ mbụ nke a ga-eburu n'uche.
Ma ebe egwuregwu a siri ike! Magara abụọ na Iguaçu nwere ezigbo mma ha na anya dị mma. Onye ọ bụla n'ime ndị ị gara leta ga-enwe echiche mara mma ma nwee ahụmahụ dị ukwuu.
Ihe: 1 Foz do Iguaçu x 1 Niagara Falls.
2- Mmiri mmiri (Oru)
N'ebe a, isi na-aga Niagara Falls na nhazi nke 2.400 m³ / s dị elu karịa olu nke Foz do Iguaçu na 1.756 m³ / s nke ụda olu.
N'ebe a, ọ dị mkpa iburu n'uche na a naghị atụle ụda olu a n'afọ. Ịtụle mmiri ozuzo nke mmiri ozuzo Iguassu Falls nwere ike iru ruo ugboro atọ mmịba ha (5.268 m³ / s). Ịbụ na isi elu akụkọ ahụ mere na 1983 (nnukwu afọ site na mgbaàmà) na-abịa na 35.000 m³ / s na efu. Ọ bụ ezie na Niagara Falls nwere ike ịba okpukpu abụọ na oge idei mmiri (4.800 m³ / s). N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, cataracts abụọ nwere ike igbanwe mmiri mmiri n'afọ. Ya mere, onye na-abawanye karịa nke ọzọ ma mgbe ụfọdụ, onye nke ọzọ na-asọ karịa nke ahụ.
Ma ị na-atụle ihe nrịba nke ọ bụla, na-enweghị atụle ọnụ ọnụ ma ọ bụ oge ezo. Ọbụna n'ihi na ndị njem nleta na-achọ ịhụ ọdịda n'oge ehihie na anyanwụ na-ezoghị mmiri ozuzo, Niagara na-ewere isi.
Ihe ọzọ dị mkpa ịkọwa isi a bụ na a na-ewere ya naanị akụkụ bụ isi nke cataracts, ọ bụghị dum mmiri. Gịnị mere nke a ji dị mkpa? N'ihi na mmiri mmiri nke Itaipu dị ukwuu karịa nke Niagara. Ma eleghị anya n'ihi na ọ na-agbasasị n'ọtụtụ mmiri ọ na-eme ka ọ kwụsịlata usoro ya na isi ihe.
Point na Falls Niagara
3- Ọnụ ọgụgụ mmiri (ọtụtụ mmiri mmiri ọ bụla nwere?)
N'ebe a, akọwapụtaghị ihe ọ bụla. Foz do Iguaçu na-eburu ihe dị mfe. Ihe mere?
Foz do Iguaçu na-enye ihe na-eme ka ọ bụrụ batrị. Ọ nwere ihe dịka 275 waterfalls bụ mpaghara kasị elu nke cataracts na ụwa.
Ugbua Niagara nwere naanị 3 bụ: Osimiri Canada, American Falls na Bridal Veil.
Ugbu a ị ghọtara ihe mere Iguaçu ji efunahụ mmiri. Ịchịkọta mmiri ahụ niile sitere na 275 waterfalls na-emecha gbasaa akụkụ nke olu. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ịbanye na naanị atọ, mgbe ahụ mkparịta ụka ahụ ga-abụ ihe ọzọ.
Point ka Foz do Iguaçu.
4 - Elu Mmiri.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere olu na oke nke mmiri mmiri, ọ gaghị adịrị mma ikwu banyere ịdị elu nke mmiri mmiri ahụ. Niagara nwere 21 nke Amerika n'akụkụ 34 mita dị elu. Ugbua na akụkụ Canada nwere mita 57 na isi ọdịda a na-akpọ Horseshoe.
Foz do Iguaçu, dị ka m na-ekwu, dị nnọọ ukwuu karị. Ọnwụ ahụ na-abata na 82 mita dị elu nke nwere mita 64 n'ogologo, ya bụ, ha dị oke karịa Niagara Falls.
5- Mgbatị nke Falls
Enweghị ihe ọ bụla iji kwurịta ebe a
Niagará nwere mita 792 na ụda Canada (inyinya onyinya), tinyekwa mita 323 nke American daa na 17 mita karịa nke Veil Brida. Ngụkọta nke mita 1.132 n'ogologo. (Ụkpụrụ dị oké ọnụ ahịa n'ihi na ọ bụ olu dị nro)
Maka Foz do Iguaçu, mgbati ahụ na waterfalls (agbakwunyere 275 dara) abụghị ihe na-erughị 2.700 mita. Ime ndokwa maka ndị ka ọtụtụ n'ime ha na-akpọ akpịrị ekwensu ma dina n'ókè dị n'etiti Brazil na Argentina na 150 mita ya n'ogo na 80 mita elu.
Maka mmeri na ndọtị, kwuo maka Iguazu.
6 - Akụrụngwa
Ọfọn, nke a bụ ihe ọzọ dị mkpa maka ndị njem nleta ma kwusi na-egwu "taco a taco" ma ọ bụ "isi na isi" ka anyị hụ ihe kpatara ya:
Niagara nwere nnukwu akụrụngwa, anyị na-ekwu maka mba abụọ mepere emepe, ya bụ Canada na United States.
Site na n'akụkụ nke Iguaçu Anyị na-ekwu maka mba abụọ dị ukwuu nke South America. Brazil na Argentina.
Ịmalite ịmalite bụ echiche m banyere njem nleta oge mbụ.
N'agbanyeghị ụzọ siri ike, Niagara nwere ikike dị ukwuu karị, ebe Foz do Iguaçu ka dị mkpa iji meziwanye ohere maka ndị nkwarụ. Maka South America n'akụkụ isiokwu a ka kwesịrị ịmepụta nke ọma. Malite na bọs na-aga na Iguassu Park. Ọ bụ ezie na bọs ahụ dị jụụ na a na-ekwu na n'ọdịnihu ọ ga-abụ ụgwọ ọrụ, ya bụ, dị ọcha, (ụgbọ ala eletrik). Ma nke a bụ ihe ga-eme n'ọdịnihu. Ma ihe nkwụnye ihe anaghị apụta ịnweta. Na Niagara, ọ ga-ekwe onye nwere nkwarụ ike ịnweta ohere dị jụụ na nchebe, mee ka ahụmahụ zuru ezu. Ihe ndị nwere nkwarụ nwere ike ịnweta ga-eme ka ọ dịrị ndị na-enweghị nkwarụ mfe. Ya mere, isi na-aga Niagara.
Ebe mmasị: Niagara Falls.
7- Ebe Njegharị
Ihe ọzọ dị mkpa bụ ịgagharị ebe ahụ.
Na Niagara anyị nwere:
Echiche ahụ, nke nweere onwe ya na dị ka ekwuru na mbụ ihe, dị mfe ịnweta. Na mgbakwunye, anyị nwere nleta na ụlọ ọrụ nke ike osisi, nke dị na 3 niile. Anyị nwekwara echiche nke Skylon Tower nke na-enye gị ohere ịhụ site n'elu mmiri. Zipu zip (zipline). Na isi: Ụgbọ mmiri nke nwere ike ịbụ ma ọ bụ site na Maapụma ma ọ bụ site na Nwanyị Ụgha nke na-eduga na ụkwụ nke Osimiri Horseshoe. Inwe ike ịgafe mba abụọ ahụ. N'akụkụ Canada, echere m na ọ bụ ihe nju oyi.
Tụkwasị na nke a, anyị nwere ụgbọ elu helikopta panoramic na ogige ntụrụndụ na nso mpaghara ahụ.
Na Foz do Iguaçu anyị nwere:
Ihe ngosi Panoramic. Ee, ihe nkesa na-enye ọtụtụ echiche na ọtụtụ echiche. O doro anya na ndị kachasị mma nọ n'ime ogige nke dara, ma ọ pụkwara ịhụ ụfọdụ mmiri na-adịghị anya. Otú ọ dị maka isi mkpuchi ọ dị mkpa ịbanye n'ogige ahụ ma kwụọ ụgwọ.
Na mgbakwunye na njem ndị anyị nwere, panoramic helikopta ụgbọ elu, parachute jump, nke nwere ike ndokwa na:
https://www.skydivefoz.com/ Na anya nke Iguazu ọ ghaghị ịdị ịtụnanya site n'ebe ahụ. Anyị nwekwara ọtụtụ anụmanụ. Ogige ahụ na-echekwa gburugburu ebe obibi ka e nwere ọtụtụ ihe ọkụkụ na osisi.
Na n'ihu ọnụ ụzọ anyị nwere ogige ọzọ bụ ogige ntụrụndụ. A chere na ọ bụ ebe nchekwa maka nnụnụ na anụmanụ na-ejide ma napụta ya n'aka anụmanụ. Ọ bụ ogige mara mma ma meghee maka ụmụ anụmanụ ịbịa na-aga mgbe ha chọrọ. Ma ndị na-enweghịzi ike ịlaghachi n'oké ọhịa dị n'ebe ahụ ma na-elekọta ha ma nye ha nri.
M ga-tinye dị iche iche tours n'ime mmiri ka rafting, rappelling, na ụgbọ mmiri na-ahapụ ma ndị Macuco Safari (Brazil n'akụkụ) na Argentine n'akụkụ bụ Great Adventure. Nke a bụ ihe na-atọ ụtọ ma gaa na abụọ dara. Ma n'ihi na ha bụ obere ụgbọ mmiri mmetụta nke adrenaline na mmiri etigbu ka ukwuu. N'okpuru ebe a bụ vidio si n'akụkụ Argentina.
N'ikpeazụ, ana m atụkwasị nleta na Usina de Itaipu (Nhọrọ dị n'etiti Brazil na Paraguay) bụ nke kachasị ukwuu n'ụwa. Ma ọ bụ ugbu a nke abụọ kachasị elu, nke atọ Gorges Damn (dam nke atọ gorges) na China. (Ọzọ n'ịtụle nkezi mmepụta data nke ike. Itaipu na 14.000 MW na Three Gorges m achọ ịma na 22.500 MW.
N'ụzọ ọ bụla karịrị 4.9 MW nke igwe igwe atọ dị na Niagara Falls.
Maka inweta njem nleta ndị ọzọ na-aga Foz do Iguaçu.
8- Fauna na Flora (gburugburu ebe obibi)
Isiokwu a na-ekpuchi ụdị ndụ dị iche iche nke mpaghara.
Na Niagara, ihe dị iche iche gburugburu ebe obibi dị ka ọ na-adịghị anya ma e jiri ya tụnyere nke Foz do Iguaçu.
N'ebe kachasị elu, na mpaghara Niagara anyị nwere azụ dị iche iche na ụfọdụ nnụnụ.
Ugbua na Foz eme Iguaçu anyị, nnụnụ, azụ, osisi, nākpu akpu, amphibians, ụmụ ahụhụ ... Anyị na-ekwu okwu banyere ebe na-echebekwa ndị ohia mmiri ozuzo na otu n'ime ndị kasị ibu gburugburu ebe obibi na nchekwa umu ogige ntụrụndụ na Brazil, nke bụ a okpomọkụ na mba.
Ọ dịkwa ike na-eme njem nleta nwere na kọntaktị na macaws, anacondas, toucans, mbe, anya ìgwè nke ụmụ nnụnụ na-ahụ tracks nke Falls ma ọ bụ nnụnụ ogige.
Ya mere, isi ihe dị iche iche dị iche iche na-aga Foz do Iguaçu.
9- Ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Ogwe.
N'ihe abụọ dara anyị nwere ezigbo ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Na ma anyị nwere ezigbo ọrụ. Ma n'ebe a, m na-edebe ndoputa ma hụ ma ọ bụrụ na ị kwenyere na m. Ọ bụ ezie na anyị na-atụnyere 4 iche iche nke dị iche iche esi nri: (United States na Canada-Brazil na Argentina) The ebe e kwesịrị na South America. Mgbe niile n'akụkụ a, anyị nwere: akụnụba nke South America ngwa nri. Ihe oriri Brazil, mmanya Argentine na ezigbo anụ mmanya nke abụọ (Argentina na Brazil). Alie ka na-enwe ọgba aghara Paraguayan nke na-eme ka abalị dịkwuo ọkụ.
Na nke a, isi na-aga Iguaçu.
10 - Egwurugwu kachasị mma.
N'ebe a, esemokwu ahụ dịghachi. Site n'iji mmiri agba mmiri na-ekpuchi mmiri mmiri ahụ nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ egwurugwu na-adịgide adịgide. N'ezie o dabere ma ihu igwe dị ehi ma ọ bụ na ọ bụghị. Ma lelee foto nke belvederes dị n'okpuru ebe a ma mee nchọta gị. Na nke a, ejiri m n'ezoghị ọnụ. A na-etinye nlezianya anya na ọ dị mfe ịnweta ebe ndị a. Cheta na n'ime mmiri abụọ ahụ nwere mmiri nke nwere ike ịdọrọ ngwá ọrụ gị. Mma ịchọrọ maka ihe mmiri na-eguzogide ọgwụ.
N'ebe a, a manyere m ịnye ihe ntanetị nke cataracts abụọ ahụ. Naanị lelee anya nke oke mmiri!
1 - Anya X X
2 - Mmiri mmiri X
3- Ọnụ ọgụgụ mmiri X
4- Elu X
5- Mgbatị nke cataracts X
6 - Akụrụngwa X
7- Njem nlegharị anya X
8- Ihe ndi di iche iche X
9- Ụlọ oriri na ọṅụṅụ na bọs X
10 - egwurugwu X X
Ọnụ ọgụgụ zuru ezu 8 4
Ya mere, utu aha nke kacha mma mmiri mmiri na-adị na ...
Foz do Iguaçu maka isi kasị mma na 8 10 nke ajụjụ megide 4 10 nke ajụjụ Niagara Falls. Ee, e nwere nyocha abụọ, mana na njedebe Iguaçu meriri ihe atụ a.
Ọ bụrụ na ị masịrị, mkpụmkpụ ma kesaa ọkwa a.
Na-ahapụ ya na ihe ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ị ga-agbakwụnye ma ọ bụ gbanwee ajụjụ isi.
Na-ejide gị ma hụ gị oge ọzọ. (I.e.
Olee otú Argentina Brasil Canada US Foz eme iguaçu Ekwensu akpịrị Niagara Falls